AUN Mowliid Macaane oo Galabta Lagu Aasay Magaalada Nairobi Iyo Madax Heer Qaran oo ka Qeybgalay Aaska (Taariikh Koobaan) | Xisbiga Xuriyada (The People Of Freedom)
AUN Mowliid Macaane oo Galabta Lagu Aasay Magaalada Nairobi Iyo Madax Heer Qaran oo ka Qeybgalay Aaska (Taariikh Koobaan)
Nairobi (MMG) Allah ha u naxariistee Xildhibaan Mowliid Macaane Maxamuud oo saaka waabarigii ku geeriyooday magaalada Nairobi ee wadanka Kenya ayaa galabta lagu aasay qubuuro ku yaalla magaaladaasi iyadoo aaska marxuumka ay ka soo qeybgaleen madax heer qaran iyo dadweyne aad u fara badan.
Meydka marxuumka ayaa galabta laga qaaday isbitaalka Aga Khan oo uu ku geeriyooday iyadoo munaasabad ballaaran oo tacsi ah galabta ay ka dhacday magaalada Nairobi.
Raysul wasaarihii hore ee DKMG Soomaaliya Cali Maxamed Geedi oo ka mid ahaa masuuliyiintii ka qeybgashay aaska ayaa sheegay in isaga uu si gaar ah dareen ugu lahaa marxuumka maadaama saddex sano oo kaamil ah uu u ahaa wasiir ka tirsan xukuumadiisa. Wuxuuna Cali Maxamed Geedi u tacsiyeeyey xaasaska iyo carruurta uu ka tagay marxuumka.
Sidoo kale raysul wasaarihii hore ee dalka Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke oo isaguna ka soo qeybgalay aaska ayaa sheegay in geerida Mowliid Macaane ay tahay tacsi soo wajahday dhamaan ummadda Soomaaliyeed.
Aaska marxuumka waxaa kaloo ka qeybgalay danjiraha Soomaaliya ee Kenya Maxamed Cali Nuur, Cali Mahdi Maxamed, Sheekh Jaamac Xaasji Xuseen, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, suxifiyiin iyo dadweyne Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya.
Taariikhda Xildhibaan Mowliid Macaane
Marxuum Mowliid Macaane Maxamuud waxaa uu ku dhadhay degmada Jowhar ee gobolka Shabeelaha Dhexe, hase yeeshee waxbarashadiisa badankeed wuxuu ku soo qaatay magaalada Muqdisho.
Wuxuu ahaa nin ku fiican ciyaaraha oo uu yaraantiisa jeclaa isagoonaxilal garsooranimo soo qabtay taasoo keentay in bilawgii 1980-meeyadii uu noqday garsoore heer caalami ah.
Bilawgii sanadihii 1990-meeyadii, markii ay burburtay dawladii dhexe ee dalka wuxuu ka mid ahaa aas aasayaashii ururkii Samo-Asal oo metalayey beelaha Jareerweyne uuna ka mid ahaa hogaankooda. Wuxuu ka mid ahaa xildhibaanadii baarlamaankii Jabuuti lagu sameeyey dawladii madaxweyne C/qaasim sanadkii 2000.
Sanadkii 2004 markii la dhisay dawladii KMG ahayd ee dalka Kenya lagu soo dhisay wuxuu ka mid noqday baarlamaanka KMG ah. Hase yeeshee waxaa uu markale isla sanadkaasi noqday wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumaddii Cali Maxamed Geedi xilkaasoo uu hayey illaa 2007-dii.
Dhowaanahan markii uu baarlamaanka KMG kala qeybsama, wuxuu Mowliid ka mid ahaa xildhibaanada ugu fircfircoonaa ee ka hor imaaday Shariif Xasan kuwaasoo 13-kii Disembar doortay Madoobe Nuunow Maxamed.
Allah ha u naxariistee Mowliid Macaane wuxuu caanku ahaa hadalo cad cad oo uu inta badan warbaahinta ka sheegi jiray, wuxuuna ahaa shakhsi aad u jecel kuna adag qadiyada Soomaalinimada iyo qaranimada dalka.
Sanadkii la soo dhaafay Mowliid Maxaane waxaa guri uu ku leeyahay magaalada Jowhar oo ehelkiisu deganaayeen la wareegay kooxda Al-Shabaab, mar uu ka hadlayna wuxuu sheegay in Shabaab ay dhac u geysteen gurigiisa.
Inkastoo amaanka Muqdisho uu xumaa sanado badan haddana Mowliid ma qaadan jirin ilaalo oo had iyo jeer waxaa lagu arki jiray hotelada iyo goobaha shirarka isaga oo kali ah ama mararka qaar uu la socdo darawalkiisa.
Sida xubno ka mid ah ehelada marxuumka u sheegeen Raxanreeb, Mowliid Macaane wuxuu ka tagay saddex xaas iyo carruur kor u dhaafeysa 20 oo ku kala nool Kenya, Talyaaniga, Canada iyo Ingiriiska.
Madaxweyane Shariif oo Suxufiyeenta Muqdisho qaarkood Casho ugu sameeyay Xarunta Madaxtooyada. (Daawo sawirada) KHILAAF SIYAASADEED OO HEER XUN KAMARAYA SOOMAALIYA